Mayelana NATHI | Thengisa izinhlobo ezinhle kakhulu zezingubo | I-stockmarca
Thenga izinhlobo ezinhle kakhulu zemfashini zase-Italy, eSpain naseFrance futhi ngenisa esifundeni sakho.
E-stockmarca singabasabalalisi bemfashini abaneminyaka engaphezu kwamashumi amathathu abanolwazi emkhakheni zombili ezindwangu nasezisekelweni. Ukuthathwa njengenye yezinkampani ezihola phambili ekusatshalisweni kwamasheya atholakalayo emikhiqizo yamafashini aphezulu, izingubo zokuthengisa ezithengisa impahla ethengisa izinto zasendlini, kanye nemfashini yase-Italy, yaseFrance neyaseSpain ngokushesha nje.
EStockmarca sinethimba labasebenzi abaqeqeshiwe abaqeqeshiwe emkhakheni wezemfashini. Kusuka kubaphathi nabathengi bokuthenga abanolwazi olukhulu kwabadwebi kanye nabachwepheshe bezentengiso abalayishe ubuciko nomoya wokwenza ngcono. Ukuzibandakanya neklayenti ngalinye kungakhathalekile usayizi noma inzuzo ukuze wakhe ubudlelwano obuphumelelayo besikhathi eside. Ngoba ukuthengisa kwethu kuncike kumakhasimende ethu athengisayo, impumelelo yawo ingeyethu. Ngakho ukunakekela izidingo ngamunye wabo uzimisele ukubazi ngokuningiliziwe futhi ubeluleke ngaso sonke isikhathi.
Xhumana nathi manje futhi ufike usihlangabeze
Sigxile emsebenzini wethu kuzo zonke izitolo zemfashini, ezinesitoko sezingubo nezesekeli zezitolo zesizini, izitolo zomkhiqizo wokuqala, izitolo eziphansi noma ezitolo. Ngokukwazi ukuthenga nge-batch, ngemikhiqizo ekhethiwe esitolo noma esitolo sethu esiku-inthanethi.
Sinesitoko semikhiqizo yamazwe omhlaba, eqinisekisa njalo ukuqhamuka nekhwalithi yemikhiqizo yethu enezitifiketi ezivela kumenzi. Yonke imikhiqizo yethu iyimikhiqizo yasekuqaleni. Imikhiqizo yezandla zokuqala, ihlolwe futhi isesimweni esifanele. Ukunikezela ngenkonzo yokunakwa iklayenti leveli yokuqala ukuxazulula noma iyiphi inkinga yefomu elisheshayo, elisebenzayo futhi ngaphandle kwenkokhiso yeklayenti.
"Sinakekela konke ukuqinisekisa ukuthi umkhiqizo ufika lapho uya khona usesimweni esifanele nangesikhathi esibekiwe. Ukunikela ngomsebenzi omuhle kakhulu wokuthengisa ngemuva kokuthi uhlale usithemba."